Ngenkathi ngisebenza ezinkampanini zebhizinisi, inselelo enkulu esasinayo kwakuwukuxhumana nokugxila kwenkampani, izinhloso namasiko kusuka ku-CEO kuye ngabaphathi kuye nakumsebenzi ngamunye. Iningi lama-CEO lalinawo izinqubomgomo zomnyango ovulekile, kepha akekho umsebenzi owaba nesibindi sokudlula ikhanda labaphathi futhi abeke engcupheni imiphumela yezombusazwe yokungena kulowo mnyango. Ngakho-ke, amanye ama-CEO angafaka isicelo se- ukuhamba ngezinyawo - Isikhathi esibekelwe ukuhamba enkampanini futhi sikhulume nabasebenzi mathupha.
Lokhu kuhlangana bekuhlala kuvula amehlo ebuholini bethu, noma kunjalo. Imizuzu embalwa ngikhuluma no ukuthi Umsebenzi uvamise ukuvula isango lokuthuthuka kwenqubo yenkampani, isiko, noma isimo sabo sengqondo sisonke.